New Zealand waxay beegsanaysaa 90% heerka tallaalka si loo joojiyo xannibaadaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Cusub ee New Zealand » New Zealand waxay beegsanaysaa 90% heerka tallaalka si loo joojiyo xannibaadaha
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Cusub ee New Zealand • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dadka si buuxda loo tallaalay waxay awood u yeelan doonaan inay dib ula xiriiraan qoyska iyo saaxiibada, aadaan baararka iyo maqaayadaha oo ay sameeyaan waxyaabaha ay jecel yihiin hubanti iyo kalsooni weyn.
New Zealand waxay joojin doontaa xannibaadaha coronavirus marka heerka tallaalku gaaro 90 boqolkiiba.
Bartilmaameedku waxa uu hubinayaa in gobolka uu ku fido dalka oo dhan waxana uu gacan ka gaysan doonaa wax ka qabashada arrimaha sinnaanta ee gobol kasta.
Xoriyado badan oo kuwa kale ku raaxaystaan ​​waxay noqon doonaan kuwa ka fog inay gaaraan dadka aan weli la tallaalin.
Sida laga soo xigtay New Zealand Raiisel wasaare Jacinda Ardern, waxay qaadan doontaa 90% heerka tallaalka dadweynaha si loo joojiyo xannibaadaha adag ee COVID-19 ee dalka.
“Bartilmaameedka 90% si buuxda looga tallaalay gobol kasta oo ka mid ah Guddiga Caafimaadka Degmada (DHB) ayaa loo dejiyay inay noqoto himilada lagu kicinayo dalka oo loo raro nidaamka cusub. Bartilmaameedkani wuxuu xaqiijinayaa inuu si wanaagsan ugu faafo gobolka oo dhan wuxuuna sidoo kale gacan ka geysan doonaa wax ka qabashada arrimaha sinnaanta ee gobol kasta.” Ardern ayaa lagu yiri warsaxaafadeed uu maanta soo saaray.
"Dadka si buuxda loo tallaalay waxay awood u yeelan doonaan inay dib ula xiriiraan qoyska iyo asxaabta, aadaan baararka iyo makhaayadaha oo ay sameeyaan waxyaalaha ay jecel yihiin si hubaal ah iyo kalsooni. Qaab-dhismeedka cusub ee Ilaalinta COVID-19 wuxuu dejiyaa dariiq hore loo maro oo ku abaalmariya tirada degdega ah ee sii kordheysa ee tallaalka New Zealand xorriyado dheeraad ah oo ay noloshooda ugu wataan si ammaan ah," Ardern ku daray.
Hadda, 86% ee New ZealandDadku waxay heleen qiyaastii ugu horreysay ee tallaalka COVID-19, halka ku dhawaad ​​69% si buuxda loo tallaalay.
Raiisel wasaare Ardern ayaa yidhi "Haddii aan wali lagu tallaalin, kaliya maahan inaad halis badan ugu jirto inaad qaaddo COVID-19, laakiin qaar badan oo ka mid ah xorriyadaha kuwa kale waxay ku raaxaysan doonaan meel aan la gaari karin."
New Zealand 134-kii saac ee lasoo dhaafay ayaa la diiwaan geliyay 19 xaaladood oo cusub oo COVID-24 ah, waana tiradii ugu badneyd ee hal maalin gudaheed ah tan iyo markii uu cudurka faafay.
Sida laga soo xigtay New ZealandWasaaradda caafimaadka ee dalka, ayaa diiwaangelisay 5,449 xaaladood oo COVID-19 ah iyadoo 28 ay u dhinteen illaa hadda.